Ihe onyonyo na nkowa nke Xiaomi Redmi Rịba ama 5 leaked | Gam akporosis
Nkọwapụta mbụ na onyonyo nke Xiaomi Redmi Rịba ama 5 leaked
Xiaomi bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu na ahịa. Firmlọ ọrụ ahụ ejirila merie ahịa Eshia ma na-etinye mgbalị ya n'oge na-adịbeghị anya n'inwe otu ihe ịga nke ọma na Europe. Dị ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ekwentị ọhụrụ ma ha enweelarị kwadebe ihe ọhụrụ Xiaomi Redmi Rịba ama 5. Ngwaọrụ nke a na-anụkarị asịrị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
N'ikpeazụ, ọ dị ka mwepụta nke ekwentị na-eru nso. Maka ugbu a, ihe oyiyi mbụ bụ ihe a ma ama nkọwa Nke ngwaọrụ. Ya mere, anyị nwere ike ịmata nke ọma ihe anyị ga-atụ anya ya. Kedu ihe nke a bụ Xiaomi Redmi Rịba ama 5?
Ihe oyiyi mbụ nke ngwaọrụ na-eme ka o doo anyị anya na ika ahụ na-ịkụ nzọ siri ike na osisi na-enweghị okpokolo agba. Ebe ọ bụ na ihe nlereanya a ga-enwe enweghi ngwụcha ihuenyo na 18: 9 ruru. Ihe nke yiri ka ọ kwadoro nkwupụta gara aga gbasara ngwaọrụ a. Ọ bụ ezie na n'ozuzu ọdịdị nke ngwaọrụ ahụ yiri nke ihe atụ nke afọ gara aga.
Banyere nkọwa, a maara na nke a Xiaomi Redmi Rịba ama 5 ga-enwe ihuenyo 5,7-anụ ọhịa jiri 18: 9 were. A na-atụ anya inwe a Snapdragon 625 processor n'ime, ya na cores asatọ. About RAM, ọ e leaked na ọ ga-abụ 4 GB mgbe ọ ga-enwe 64 GB nke nchekwa dị n'ime.
La igwefoto azụ ga-abụ 12 MP na onye ihu maka selfies nke 5 MP. Enweela ọtụtụ nkọwa banyere batrị ya. Mediafọdụ mgbasa ozi kwuru na ọ ga-abụ ihe karịrị 4.000 mAh. Ọ bụ ezie na, ọ dị ka ozi kachasị ọhụrụ na-egosi na ga-abụ 3.300 mAh. Ihe doro anya bụ na ọ ga-eme Gam akporo 7.1. Nougat dị ka ọkọlọtọ ma nwee MIUI 9 dị ka akwa nhazi.
El Ibido ọnụahịa nke Xiaomi Redmi Rịba ama 5 ga-abụ ihe dịka euro 178. Yabụ n'ihe na-erughị euro 200 ị chọta ekwentị mgbaze na-arụ ọrụ zuru oke. Banyere mmalite nke ngwaọrụ enweghị ihe ekwenyesiri ike. A na-atụ anya ka ewepụtara ya n’izu ndị mbụ n’afọ 2018. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-atụ aro na a ga-ewepụta ya na MWC na Barcelona.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwapụta mbụ na onyonyo nke Xiaomi Redmi Rịba ama 5 leaked
[APK] Download Pixel Launcher 2 Enweghị mgbọrọgwụ Google nnyemaaka enyere